Tahotra Ny Amin’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety Any Hong Kong Aorian’ny Fividianan’ny Alibaba Ny South China Morning Post · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2016 14:38 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Nosoratan'i Vivienne Zeng ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 14 Desambra 2014 ity lahatsoratra ity. Navoakan'ny Global voices eo ambany fifanekem-piaraha-miasa indray ity dika nasiam-panovàna eto ambany ity.
Hovidian'ny Alibaba, ilay orinasa Shinoa goavana be mikirakira ny aterineto, 2,06 lavitrisa dolara HK (manodidina ny 265 tapitrisa dolara Amerikana) ilay gazety matanjaka indrindra amin'ny teny anglisy, South China Morning Post ( Lahatsoratra Maraina any Shina Atsimo) any Hong Kong sy ireo haino aman-jery hafa fananan'ny Vondrona SCMP, araka ny fanambaràna nataon'ilay vondrona tany amin'ny tsenambolan'i Hong Kong tamin'ny 14 Desambra.
Niteraka ahiahy momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety tao an-tanàna ilay fifanarahana, izay noraiketina ny Zoma 11 Desambra teo, taorian'ny herinandro vitsy nifandrirariràna hitadiavana tobony misimisy kokoa.
Niarahana nanorina tamin'i Tse Tsan-tai, iray amin'ireo shinoa revolisionera voalohany tamin'ny fianakaviana matanjaka Qing farany, sy ny mpanao gazety tranainy Alfred Cunningham ny South China Morning Post ary navoaka voalohany tamin'ny 1903. Navadik'i Tse ho vovonana hiarovana ny fiovàna sy ” trano pirinty ho an'ny revolisiona Shinoa ” ilay gazety. Foana tsikelikely izany maha-revolisionera azy izany, indrindra taorian'ny nisintahan'ny fanjakana sy ny nanomezana azy ho an'ny Rupert Murdoch's News Corporation ( orinasa mpikirakira vaovao Rupert Murdoch ) tamin'ny 1987 sy ny nivarotana azy tamin'ilay Maleziana mpandraharaha goavana, Robert Kuok, tamin'ny 1993. Taona vitsivitsy izay dia notsikeraina noho ny fombàn'ny matoandahatsorany an'i Beijing sy nampangaina noho ny sivana ataony amin'ny vaovao politika ilay gazety. Maro no milaza fa ho lasa mpitondra tenin'ny governemantan'ny tanibe Shinoa ny fiovàn'ny tompon'ilay gazety ho Alibaba.
Nolazain'ny Fikambanan'ny Mpanao gazety any Hong Kong tamina fanambaràna ny ahiahiny tamin'ny filazany fa mety hidika io hoe misy fifanarahana bebe kokoa amin'ny fandrakofana an'i Shina ny fiovàn'ny gazety tompo.
Nampitebiteby indrindra ny fikambanana ny fanamarihana nataon'ny Lefitry ny Tale mpanatanteraky ny Alibaba, Joseph Tsai, izay nilazany fa manantena izy ho afaka manolotra fomba fijery hafa noho ny an'ireo haino aman-jery tandrefana mahazatra izay milaza ny vaovao momba an'i Shina ny South China Morning Post
Mandritra izany fotoana izany, nitaraina ireo mpisera amin'ny aterineto Shinoa fa mety hidika “fahafatesana” ho an'ny gazety tranainy efa anjato taona ilay fifanarahana. Nohazavain'ny sasany amin'ireo mpisera amin'ny vovonan'ny haino aman-jery malaza Weibo ny momba ny South China Morning, raha ny hafa kosa nilaza fa mety ho lasa “haino aman-jerim-panjakana” ilay gazety.
Tsara sa ratsy ilay Fifanarahana ?
Iray amin'ireo lohahevitra mafana indrindra nandritra ny faran'ny herinandro ny fifanarahana SCMP-Alibaba taorian'ny namoahan'ny South China Morning Post ny vaovao tao amin'ny tranonkalany ny alin'ny 11 Desambra, ary avy hatrany dia narahan'ny fanambarana nataon'ny Alibaba, resadresaka lalina niaraka tamin'i Tsai sy ny taratasin'i Tsai ho an'ny mpamaky, izay nianianany fa hiarovany ny fahaleovantenan'ny asa fanaovana gazety.
BAT (Baidu, Alibaba ary Tencent) orinasa goavana mpikirakira aterineton'i Shina. Sary : Hong Kong Free Press
Raha nampitaha ilay fifanarahana tamin'ny fividianan'ny lehiben'ny Amazon Jeff Bezos ny Washington Post ny ankamaroan'ny tatitr'ireo haino aman-jery tandrefana, ny tati-baovao Shinoa kosa dia nanadihady ny tontolon'ny haino aman-jery ao an-toerana. Maro no nanamarika fa nanatsara ny fomba fiasany ny Alibaba mba hifaninana amin'ireo orinasa goavana roa mikirakira ny aterineto ao amin'ny fikambanana malaza BAT – ny Baidu sy ny Tencet.
Samy manana ny tranonkalan-tseraseram-baovao sy ny lanjany any amin'ny orinasa momba ny fialamboly sy ny haino aman-jery sosialy ny Baidu sy ny Tencent. Noho ny fahataràny tamin'ilay lalao, dia nanao fihetsika stratejika tamim-pahamalinana ny Alibaba tamin'ny fividianana ilay haino aman-jery anglisy matanjaka, izay efa am-polo taona maro no nitatitra ireo resaka heverina fa saropady momba an'i Shina , araka ny filazan'ny haino aman-jery vaovao Jeimian.
Nomarihin'ny Bloomberg fa fifanarahana sy raharaham-barotra tsara ho an'i Alibaba ny fahazoana an'io. Fara-fahakeliny avo roa henin'ny vola niditra tamin'ny fandraharahan'ny media tamin'ny taona lasa no nahazoan'ny orinasa e-commerce ny South China Morning Post, raha toa ka avo enina henin'ny vola vinavinaina hiditra amin'ny 2016 no nivarotana ny Busness Insider tamin'ny Axel Springer SE, hoy hatrany ny Bloomberg. Nomarihan'i Peter Schloss, Tale mpiara-miombon'antoky ny Castel Hill Partners LLC, orinasa mpanolo-kevitra sy mpampiasa vola any Beijing, ao amin'io tatitra io ihany fa “nomen'i Jack Ma tombony manokana ny governemanta foibe tamin'ny fiantohana ny haha-eo an-tànan'ny namana ny South China Morning Post.”
Na izany aza, nolazain'ny Tech In Asia fa hadisoana goavana eo amin'ny fifandraisana ivelany ho an'i Ma ilay fifanarahana. “Novidian'i Alibaba ny South China Morning Post mba hanapariahana fitantaràna tsara momba an'i Shina. Hevitra mampihorohoro izany,” hoy ny tonian-dahatsoratra, Charles Custer, ” Ny olana – ary ity no hadisoana goavana nataon'ny Alibaba- dia izy izao no lasa mpisolo vaika ny ankàlana amin'izay rehetra sy ny tranga rehetra momba ny fironan'ny mpomba an'i Beijin hita ao anaty gazety.”